Mkchromecast, tumira zvirimo kuChromecast yako kubva kuPC yako nenzira yakapusa | Linux Vakapindwa muropa
Si iwe uri mushandisi wechigadzirwa cheChromecast uye kunyange chengeta uye kutamba mafaira ako multimedia kubva kombiyuta yako Chromecast wako chinyorwa ichi chinogona kukufadza.
Uye zvakatonyanya kudaro kana kubvira mavhezheni eVLC azvino asingachaone mudziyo wako pane yako network. Ndokusaka zuva ra Nhasi tichataura nezveimwe yakanakisa imwe nzira inonzi Mkchromecast.
Chekutanga pane zvese isu tinokupa iwe diki mharidzo yeMkchromecast iyo musimudziri wayo anotiudza pane webhusaiti izvo Iyo yakanyorwa muPython3 uye inogona kupfuura node.js, zvinoita(Linux) ffmpeg kana avconv.
MKchromecast inokwanisa kushandisa ekurasikirwa uye asina kurasikirwa mafomati mafomati chero bedzi ffmpeg, avconv (Linux) kana parec (Linux) yakaiswa.
Uyewo inotsigira kutamba-makamuri-mapoka boka uye ne 24-bit / 96 kHz odhiyo odhiyo.
Zvakare, systray menyu inowanikwa.
Nokusingaperi, Mkchromecast hova ine node.js (kana inoita kunge Linux) pamwe ne mp3 odhiyo encoding fomati pa44100Hz sampuli rate uye 192k avhareji bitrate.
Ndatonzwisisa zvishoma nezve Mkchromecast, ndinofanira kukuudza izvozvo chishandiso ichi CLI saka haina graphical interface uye kuti kushandiswa kwayo kwese kunoitwa kubva pamutsetse wekuraira.
Chokwadi ndechekuti mashandisiro ayo ari nyore uye haunyatsoda GUI (kunyangwe paine vachatoda imwe).
Chimwe chezvinhu zvinonakidza nezve Mkchromecast kugona kutumira zvako zvemukati kune chako chishandiso chakabatana kune imwecheteyo network pakarepo, izvo, kusiyana nemamwe masevhisi aine chinangwa chimwe chete, mazhinji acho anoda kudzoreredzwa kweanowirirana zvemukati kuti atambe pa Chromecast.
Sezvo semuenzaniso mune yangu nyaya kubva kwekupedzisira vhezheni yeVLC, izvi hazvichazoona yangu Chromecast saka ndaifanira kutendeukira kune zvimwe zvishandiso izvo vamwe vari vezvenhau nzvimbo kana ivo vakapedzisira varasikirwa nekodhi yefaira.
Kusvika ndarangarira Mkchromecast uye kugadzirisa matambudziko angu.
1 Kuisirwa Mkchromecast
1.1 Kushandisa kwekutanga
Kuisa iyi application ingova ne python uye pombi yakaiswa pane yedu system kana kune vashandisi ve Ubuntu, Debian uye zvigadzirwa zveizvi, ivo vanongofanirwa kuisa iyo app kubva kune avo ekuchengetera.
Kuisirwa mune izvi kunogona kuitwa kuvhura terminal (Ctrl + Alt + T) uye kuita unotevera kuraira mairi:
Muchiitiko chekuti pasuru yacho ikasawanikwa, ivo vanofanirwa kurodha pasi dhizaini yekumisikidza kwenzvimbo
Uye isu tinogona kuisa izvi nekuita unotevera kuraira:
Kana iri Arch Linux, Manjaro, Antergos vashandisi kana chero kumwe kugovera kunoenderana neArch Linux isu tinogona kuisa kubva kuAUR repositories.
Iwe unongofanirwa kuve neiyo repository yakavhurwa uye iyo AUR wizard yakaiswa. Kana usina, unogona tarisa kune inotevera positi.
Mune terminal isu tinongofanirwa kuita unotevera kuraira:
Pakupedzisira kwe zvimwe zvese zvekuparadzirwa kweLinux zvine Python nepombi yakaiswa. Kugadzirisazve kuiswa kweichi.
Mune terminal tinonyora:
Isu tinoenda kune dhairekitori uye toenderera mberi nekuita pombi yekuisa pamwe nezvinodiwa.txt faira rine zvese zvinoenderana nezvinodiwa kuti chishandiso chishande nemazvo:
Kana kana paine matambudziko, tinosarudza kumhanya nesudo:
Uye ndizvozvo, isu tatova nechombo ichi chakaiswa.
Iye zvino kutanga kushandisa mkchromecast, kubva kuchiteshi isu tichaenda kutumira zvemukati kune yedu kifaa iyo, sezvambotaurwa, inofanirwa kuve yakabatana kune imwecheteyo network (kunyanya).
Kuendesa zvirimo kune yedu chromecast, Ingo daidza chishandiso uye uratidze mhando yezvinhu zvekutamba ingave vhidhiyo, mumhanzi kana imwe vhidhiyo yeYouTube (inoda youtube-dl yacho).
Muchiitiko chekutepfenyurwa kwevhidhiyo, ingo mhanyisa iwo murairo:
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Linux software » Mkchromecast, tumira zvirimo kuChromecast yako kubva kuPC yako nenzira yakapusa
Antonio Carlos akadaro
Zvinoita here kushandisa mkchromecast ku «girazi» kubhuku rejira (rinomhanya linux) paTV kana chishandiso cheGoogle Chromecast chakaiswa pachiteshi cheHDMI?
Pindura Antomio Carlos